कोरोना कहर:सामाजिक दूरीको मापदण्ड कुन–कुन देशमा कति–कति ? - Tamang Online
याम्बु । ब्रिटेनको सरकारमाथि उसले लागु गराएको २ मिटर (६ फिट) को सामाजिक दूरीको मापदण्ड खुकुलो बनाएर मानिसहरूलाई काममा फर्कन सहज बनाइदिन सांसद तथा व्यवसायीहरूले दबाव दिइरहेका छन्। तर वैज्ञानिकहरू चाहिँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे अझै पनि पर्याप्त जानकारी नभएको अवस्थामा कतै त्यसो गर्नु असुरक्षित हुन्छ कि भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।
के भन्छ विज्ञान?
सामान्य ज्ञान के हो भने तपाईँ अरू सङ्क्रमित मानिससँग जति नजिक हुनुहुन्छ त्यति नै सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले १ मिटरलाई सुरक्षित दूरी भनेको छ। कैयन् देशले यही मापदण्ड अनुसरण गरेका छन् भने यूकेले चाहिँ योभन्दा कडा मापदण्ड लगाएको छ।
कुन देशमा कति दूरीको मापदण्ड?
१ मिटर मापदण्ड: चीन, डेनमार्क, फ्रान्स, हङ्गकङ्ग, लिथुआनिया, सिङ्गापुर
१.४ मिटर: दक्षिण कोरिया
१.५ मिटर: अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ग्रीस, इटली, नेदर्ल्याण्ड्स, पोर्चुगल
१.८ मिटर: अमेरिका
२ मिटर: क्यानडा, स्पेन, यूके
तर केवल दूरीमा मात्र सङ्क्रमण भर पर्दैन। समय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिसँग जति धेरै समय नजिकै बितायो उति धेरै सङ्क्रमणको सम्भावना बढ्छ।
यूके सरकारलाई परामर्श दिइरहेका वैज्ञानिकहरूका अनुसार १ मिटरको दूरीमा कसैसँग ६ सेकेण्ड बिताउनु र २ मिटरको दूरीमा १ मिनेट बिताउनु उस्तै उस्तै हो।
कसैले खोकिरहेको बेला नजिक पर्नु थप जोखिमपूर्ण हुन्छ। खोकेको बेला २ मिटर टाढा रहनु र उही दूरीमा आधा घण्टासम्म कसैसँग कुराकानी गरिरहनुको पनि जोखिम उस्तै हुन्छ।
पछिल्ला अध्ययन के भन्छन्?
‘द ल्यान्सेट’ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको समीक्षा गरेका छन्। उनीहरूले अरू मानिससँग कम्तीमा १ मिटर टाढा रहनु नै सङ्क्रमणबाट जोगिने उत्तम उपाय भन्ने निचोड निकालेका छन्।
१ मिटरभन्दा कम दूरीमा रहँदा सङ्क्रमणको जोखिम १३% हुन्छ भने त्योभन्दा टाढा रहँदा जोखिम घटेर ३% हुने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। साथै, १ मिटरदेखि ३ मिटरबीच जति अतिरिक्त मिटरको दूरी कायम गरियो जोखिम पनि आधाको दरले घट्दै जाने अध्ययनले देखाएको छ।
दूरीको नियम कसरी सुरु भयो?
यसको सुरुवात सन् १९३० ताका गरिएका अनुसन्धानबाट भए। खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा निस्कने छिट्टा चाँडैनै वाष्पीकृत हुने तथा भुइँमा खस्ने वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए।
अधिकांश छिट्टा १ देखि २ मिटरभित्रै भुइँमा खसिसक्ने गरेको देखियो। त्यसैले धेरै जोखिम तब हुन्छ जब तपाइँको सामु कसैले नजिकै खोक्छ वा जब कुनै सतहमा लागेको खोकीबाट निस्किएको छिट्टा तपाइँले छुनुहुन्छ र हात अनुहारमा लैजानुहुन्छ। – बीबीसी नेपाली
« कोरोना महामारी झनै बढ्यो, ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन : डब्ल्यूएचओ (Previous News)
(Next News) इजरायल र साईप्रसबाट नेपाल फर्कन चाहनेको नामावाली परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्यो »